Idatha egcwalisiweyo yedatha yeGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL | I-Androidsis
Okokuqala, UGoogle uzakwazisa iimodeli zayo ezingabizi kakhulu Umgca we-pixel wangoku. Oku kuyakubetha emarikeni ngeempawu ezimfutshane kunye neenkcukacha.
Ezi zixhobo zimbini, zibhalwe ngegama elithi 'Sargo' kunye 'neBonito', ekuqaleni zazenzelwe ukuba zithengiswe njenge IPixel 3 iLite y IPixel 3 XL Lite. Nangona kunjalo, kwakusaziwa njalo kungekudala amagama abo okuthengisa 'yiPixel 3a' kunye 'nePixel 3a XL', ngokulandelelana. Iinkcukacha ezithe kratya ngoku ziye zavela malunga neefowuni.
Ibhlog yaseJamani yeTekhnoloji I-Winfuture uxela ukuba ulwazi olufunyenwe kubathengisi baseYurophu abakwi-intanethi luqinisekisa ukuba zombini iifowuni zibizwa ngokuba yiPixel 3a kunye nePixel 3a XL. Nazo ziyakuqinisekisa oko Zombini izixhobo ziya kuba ne-64GB yendawo yokugcina eyakhelweyo. Akukho lwandiswa lokugcina kwaye akukho zindaba zolunye uhlengahlengiso lweROM.
Ukunikezelwa kwePixel 3a ecociweyo
Kukwabonakalisiwe ukuba, ukongeza kumbala omnyama nomhlophe, kuya kubakho owesithathu obizwa ngokuba ngu "Iris." Lo mbala kuthiwa ukuluhlu oluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kwi-violet. Ngaphandle koko, olunye ulwazi olutyhilwe ngabasasazi belumalunga nexabiso, nangona bebengachazanga malunga nalo. Abantu bathetha lonto IPixel 3a iya kuthengisa malunga nee-euro ezingama-450Ngelixa iPixel 3a XL enkulu iza kuthengiswa ngamaxabiso aphezulu, njengoko kulindelwe.
IPixel 4 idibene: dibana neflegi elandelayo esehovini
Iingxelo zangaphambili zibonisa ukuba zombini iifowuni ziya kuba nezikrini ze-18: 9, i-Active Edge, -into evumela ukuba ucofe ifowuni ukwenza u-Google Assistant-, inkxaso ye-eSIM kunye ne-chip yokhuseleko yeTitan M. Baza kuba nekhamera enye kwicala ngalinye. Umahluko wehla kwiscreen esikhudlwana kunye namandla aphezulu ebhetri kwiPixel 3a XL., kodwa akukho siqinisekiso sokuba iyakusebenzisa i-Snapdragon 670 njengePixel 3a. Mhlawumbi uxhobise i-SoC enamandla ngakumbi, eya kuba yi-Snapdragon 710. Ezi nkcukacha ziya kuqinisekiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL: oku kukukhanya okwahlukileyo kuthotho lwePixel 3